Malagasy Gospel : hiseho amin’ny tanàna 14 any Espaina | NewsMada
Malagasy Gospel : hiseho amin’ny tanàna 14 any Espaina
Niainga, ny talata hariva teo teto an-tanindrazana ary nihazo an’i Espaina, ireo tanora mpiangaly gospel, ao anatin’ny tarika Malagasy Gospel, izay sahanin’ny fikambanana Bel Avenir any Toliara. Miisa 25 ny delegasiona, ahitana ny mpikarakara sy ny mpandrindra ny tarika.
Fantatra fa efa in-11 izao ity tarika ity no nivahiny any Espaina. Haharira iray volana ny dia amin’ity indray mitoraka ity ka, ankoatra ny fampisehoana, hisy ny fihaonana sy fifampizarana kolontsaina amin’ny tanora toa azy ireo. Eo koa ny fitsidihana tanàna maromaro, hanampy azy ireo amin’ny fahalalana ankapobeny.
Mikasika ny fampisehoana, miisa 14 ny tanàn-dehibe hanatanterahan’ny Malagasy Gospel fiakarana an-tsehatra, any Espaina any. Hira nentim-paharazana malagasy, hira amin’ny teny espaniola, anglisy ary “zoulou”. Ireo ny hoentin’ny tarika, mandritra ity dia ity ary miompana amin’ny fanentanana mikasika ny zon’ny ankizy ny ankamaroan’ireo.
Mbola tafiditra hatrany amin’ny fanamarihana ny faha-15 taona niorenan’ny fikambanana Bel Avenir izao dian’ny Malagasy Gospel any Espaina izao. Tsiahivina hatrany fa tovovavy manan-talenta, ampian’ny tovolahy iray izay manana fahasembanana amin’ny maso, no mandrafitra ny tarika. Samy avy amin’ny fokontany be fianakaviana sahirana, any Toliara any, izy ireo.